Mayelana Nomsunguli - Chengdu Xinzi Rain Clothing CO., Ltd.
Uhlale ethanda izicathulo, futhi uthemba ukuthi bonke abesifazane bangagqoka izithende eziphakeme ezizifanelayo futhi zibanike amandla amaningi.Isungulwe uhlobo oluzimele lokuklama izicathulo ngo-1998, ikakhulukazi egxile ekucwaningeni indlela yokwenza izicathulo zabesifazane zesimanje ezikhululekile futhi ezinemfashini.Futhi bengizama ukwephula umkhuba nokuchazwa kabusha.Ukuthola abesifazane ukuthi bagqoke izithende zabo eziphakeme akusewona umsebenzi onzima.Futhi ugqoke izithende eziphakeme ezingaboshiwe, hamba lapho bethemba ukuya khona.
Kodwa-ke, iminyaka yokuhlangenwe nakho kwezingubo zangaphansi imshiye enesifiso esinamandla sokuthi abesifazane baphule isimiso sabo, waze wacabanga ngomqondo othi "Okuklanyelwe Wena" ukuze abone ukuthi wonke umuntu wesifazane ufanelwe izingubo zakhe zangaphansi eziyingqayizivele.Igcwele amandla, i-sexy, i-charm, ingenye ukubonakaliswa kobuhle besifazane.
Uhlale ekholelwa ukuthi ukuba sexy akukhona nje ukujabulisa abanye, kodwa futhi mayelana nenkululeko.Ngakho-ke kwaqala ukwakha owakho umkhiqizo ngo-2004, futhi ngale ndlela, kuyoba nesibopho esiqinile, umgomo wokuthwala nokuhambela kude, umbono wekhasimende kuqala, kanye nesibopho sokuhlala ulalela futhi uhlangabezane nezidingo zamakhasimende.Lo mkhiqizo udlule iminyaka engu-17 ngaphansi kobuholi bakhe.
Ngemva kocwaningo oluqhubekayo nokuhlola, uthole ngazwi linye ukuqashelwa nokunconywa kumakhasimende ngezinhlobo ezilandelayo, njenge-Sexy Lingerie, Sportswear, kanye ne-Seamless Bra&Brief Sets.Ngokwenkolelo yakhe, wonke umuntu wesifazane, kungakhathaliseki ubudala, umsebenzi, kanye nesibalo, ufanelwe izingubo zabo zangaphansi.
I-Xinzi Rain izuze impumelelo enkulu ngenxa yesipiliyoni sayo sokugqoka esintofontofo kanye nomklamo osemfashinini.Nesithunzi sayo sesiqalile ukusabalala, isithandwa kabi ngabesifazane abaningi abazimele.
Iphupho eliwujuqu ukuletha amandla kuwo wonke umuntu wesifazane ogqoke izingubo zakhe zangaphansi ezivela ku-Xinzi Yu, ukuthi bahlale bebhoboza futhi bashintshe amandla abo, baqedele iphupho labo ngala mandla, futhi baqhubekele phambili ngokunganaki futhi ngokothando...